जनवरी 27, 2020 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments नेपाल र नेपालीको अवस्था, परिवर्तन
परिवर्तन कसरी सम्भव छ नेपाल र नेपालीको अवस्थाको ? आजको यो समयमा हामीले नेपाल र नेपालीको स्थितिको बारेमा चिन्तन गरौं । हामीले एउटा पूरै पुस्तालाई असफल बनाई दिएका छौँ। हामी उनीहरूको आत्माले भन्न खोजेको कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनौं । आफ्नो तन्नेरी छोरालाई बिदा गरिरहेको आमा बुबाको आँखाबाट झरिरहेको आँसुलाई हेरौं ।
हामीले चाहेमा यो परिस्थितिलाई बदल्न सक्छौँ । आज हामीसँग यो परिस्थिति बदल्ने ऐतिहासिक अवसर पनि छ । हामीले यो अवसरको सदुपयोग गर्नैपर्छ किनभने यही हो सामाजिक न्याय र नैतिक दायित्व । नागरिकका रूपमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि यही नै हो ।
हामी निराश र चिन्तित नबनौँ । निराशा र चिन्ताले हामीलाई पिरोल्न थाले भने हामी आफैँलाई सोध्ने गरौँ – म अरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छु होला ? अनि त्यसैअनुसार कार्य गरौँ किनभने त्यस्तो प्रभावले नै जीवनमा ठूलो महत्व राख्छ ।
मे 23, 2019 मे 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0